Wzọ 5 iji wusi usoro ike na-enweghị imebi ihe okike | Martech Zone
Tuesday, February 11, 2020 Mọnde, Febụwarị 10, 2020 Heidi Melin
Ndị na-ere ahịa na ndị okike nwere ike ịnweta ntakịrị nkwekọ mgbe okwu gbasara usoro abịa. Nke a ekwesịghị iju anyị anya. A sị ka e kwuwe, anyị na-akwụ ha ụgwọ maka ikike ha nwere na mbụ, na-echetụ n'echiche, ọbụnakwa na-adịghị iche. Anyị chọrọ ka ha na-eche echiche kpamkpam, mee ka anyị pụọ n'okporo ụzọ a kụrụ akụ, ma wuo ụdị ọhụụ nke pụtara n'ọma ahịa jupụtara.
Anyị enweghị ike ịtụgharị wee tụọ anya na ndị okike anyị ga-ahazi nke ọma, ndị na-eso ụzọ na-achịkwa usoro ndị na-enweghị ike ichere iji nyochaa nuances nke arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Mana ọbụlagodi ndị nweere onwe ha n'etiti anyị ga-ekweta na mgbe usoro adịghị ike ma ọ bụ enweghị, ọgba aghara na-achị, nke ahụ adịghịkwa mma maka imepụta ihe.
N'ime ụwa ebe onye ọrụ ihe ọmụma na-emefu ego 57% nke oge ha on ihe niile ma ọrụ ha goro ha ịrụ, itinye ụdị nhazi kwesịrị ekwesị dị mkpa karịa mgbe ọ bụla. Ọ bụ naanị ụzọ iji gbochie pandemonium n'ọnụ mmiri ma nyere onye ọ bụla aka ịrụ ọrụ ya kacha mma.
Ndị a bụ ụzọ ise iji wusie usoro ike iji weghachite oge maka ụgwọ ọrụ, ọrụ okike dabara na ebumnuche kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ.
1. Kpachara anya banyere ya
M nnukwu onye ofufe nke Kelsey Brogan si "sneaky usoro" obibia. Dị ka onye nduzi nke usoro mmemme jikọtara na T-Mobile, Kelsey hụrụ n'anya na-egosi ndị mmadụ na ahaziri workflow ekwesịghị ịdị na-egbochi.
Ọtụtụ ndị anaghị enwe mmasị n'okwu a 'usoro' ma ọ bụ echiche ahụ n'ihi na ha chere na ọ siri ike. Ọ bụghị maka ịmepụta oke mmachi iji mee ka ndị mmadụ nọrọ n'okporo ụzọ ha. Ọ bụ ịmata ebe ihe dị, ebe ihe kwesiri ịdị, ebe ha dabara. Ọ bụ maka ịkọzigharị ndepụta onye ọ bụla na itinye ha ebe onye ọ bụla nwere ike ịbanye.
Kelsey Brogan, Director nke Integrated Program Management na T-Mobile
Mana ọ naghị adabere n'ike nke ikwenye ya ma ọ bụ jiri iwu dị elu iji nweta ndị otu. Kama nke ahụ, ọ na - enyere otu aka ịgbanwe n'otu oge, mgbe ahụ ọ na - enye ohere uru pụtara ìhè nke usoro siri ike ikwu maka onwe ha. Ozugbo ndị otu dị nso nwere ike ịhụ ihe dị iche njikwa njikwa ọrụ na-arụ, ha na-amalite ngwa ngwa na ha ga-abụ akụkụ nke ya n'onwe ha. Kzọ Kelsey si eme ihe bụ ihe akaebe na mgbe ejiri njikwa mgbanwe mee ihe n'ụzọ gara nke ọma, ọ na-agbasa ma gbasaa n'ụzọ anụ ahụ.
2. Tinye Ndebiri na Ọrụ Ntugharị
Creativedị okike na-enweghị mmasị na ugboro ugboro, ọrụ enweghị uche karịa ọtụtụ. Mee ka ha nwere onwe ha site na itinye ndebiri n’ebe ọ bụla ọ bara uru. Jiri teknụzụ njikwa ọrụ nke ụlọ ọrụ iji mepụta listi ọrụ zuru oke maka ụdị ọrụ dị iche iche, na-ekenye ọrụ ọrụ na akpaghị aka, yana ọbụna na-eme atụmatụ oge na awa elekere maka subtask ọ bụla. Nke a na - eme ka ihe niile na - egbu mgbu na - agaghị ahụ ndị okike gị.
Ndị na-ere ahịa nwere ike ịbanye na ozugbo hụ ọrụ enyere ha n'otu n'otu. Ndị okike okike nwere ike iji ihe eji eme atụmatụ iji wuo onye ọ bụla, kama ịme ka ị gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ zipụ ọtụtụ ozi ịntanetị iji chọpụta onye nwere oge maka ihe.
3. Gwa Odee Ihe Odide
Ihe dị mfe dịka ịkọwapụta usoro oriri gị, nke na-edozi usoro maka ọrụ ndị ọzọ, nwere ike ime nnukwu mgbanwe na usoro okike gị. Malite site n'ịhụ na edozi arịrịọ ọrụ ọ bụla n'otu ụzọ ahụ-ọ bụghị site na email, ederede nnyapade, ma ọ bụ ozi ozugbo. Nwere ike ịtọlite ​​mpempe akwụkwọ Google nke na-ebupụta mpempe akwụkwọ na-akpaghị aka ma ọ bụ, ọbụlagodi ka mma, jiri ọrụ arịrịọ arụ ọrụ na nhazi usoro njikwa ọrụ gị.
4. Wepụ Ihe Mgbu Ahụ na Gosiri
Ọ bụrụ na ịhọrọ otu ụzọ usoro okike iji wusie ike ma mee ka ọ dịwanye mma, nyocha bụ nke nwere ike imeri obi na uche nke otu ndị okike gị. Site na teknụzụ na-enyocha dijitalụ, ịnwere ike iwepu agbụ email na-enweghị nsogbu, nzaghachi na-emegiderịta onwe ya, na ntụgharị ụdị. Ndị okike na ndị njikwa okporo ụzọ nwere ike ịhụ onye zaghachiri na onye na-azaghị, na-ebelata mkpa ọ dị ịchụ ndị nwere oke ma ọ bụ rịọ maka nzaghachi.
Maka akara ego, gbakwunye njikwa akụ dijitalụ (DAM) na ngwaọrụ gị. Ndị ahịa niile ga-enwe obi ụtọ ịnweta ngwa ngwa nke ụdị ọhụụ nke akụ akwadoro, nke ha nwere ike ịhazigharị na mbupụ na ụdị ha chọrọ, na-enweghị ịgafe onye nche ụzọ mmebe eserese. Cheedị ụdị ihu ndị na-emepụta gị nwere mgbe ha nụrụ na ha agaghị ezitere mmadụ ozi jpg ojii na ọcha jpg nke njirimara ụlọ ọrụ ahụ ọzọ.
5. Kpọọ ihe ndenye onye ọ bụla
Mgbe ọ bụla ị na-eme mgbanwe usoro ndị dị ugbu a-ma ị na-eme mgbanwe dijitalụ zuru oke ma ọ bụ na-emejuputa mmelite arụ ọrụ ezubere iche-na-agba ndị mmadụ ume ka ha nwee mmetụta mgbanwe ndị ahụ. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnwe onye nchịkwa sistemụ ma ọ bụ ọkachamara ọkachamara njikwa ọrụ na-arụ ọrụ aka nke nyocha nke usoro ọrụ, na-edepụta usoro a, ma na-ewu ndebiri ahụ, gbaa mbọ hụ na ndị okike a na-atụ anya ịgbaso usoro a metụtara usoro ọ bụla. nke ụzọ.
Nye Usoro ohere
Nụla okwu ochie ahụ na ezi mma kwesịrị ịbụ anya. Usoro ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Mgbe ha na-arụ ọrụ nke ọma, ị kwesịrị ị na o siri ike hụrụ ha. Ha ekwesịghị inwe ọgba aghara ma ọ bụ na-adọpụ uche ma ọ bụ na-agwụ ike. Ha kwesiri iji nwayo, n’adighi ahu anya kwado oru nke kwesiri ka emee.
Na ihe na-akpa ọchị na-eme mgbe ụdị okike na-enweta usoro ọrụ n'ụzọ dị otu a - nguzogide ha ikwu okwu nhazi na arụ ọrụ niile ga-apụ n'anya. Ha na-achọpụta ngwa ngwa na usoro dijitalụ a haziri nke ọma na-eme ihe karịrị ịhapụ ha n'ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ikwughachi ọrụ ugboro ugboro. Ha na-enyekwa ha ike iwepụta ọlụ dị elu karịa ngwa ngwa na oge niile, weghachi oge maka imepụta ihe na ihe ọhụrụ, ma na-etinyekwu oge kwa ụbọchị na-arụ ọrụ ahụ ha goro ka ha rụọ.
Tags: usoro okikedamimewe mmekotandebiri ndebirinyocha dijitalụkelsey broganihe nnyapadet-mobile
Heidi bụ Chief Marketing Officer maka Ebe ihu ọrụ. Heidi bụ onye dị elu na-arụ ọrụ, onye isi na onye ndụmọdụ ndụmọdụ nwere ihe karịrị afọ iri abụọ n'ịzụlite na imezu atụmatụ ahịa na ahịa nke na-eme ka uto.